World Cup 2018 - विश्वकपका दर्शकलाई फ्रि भिसा
विश्वकपका दर्शकलाई फ्रि भिसा
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल २०१८ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको रूसले विश्वकपका दर्शकलाई फ्रि भिसा दिने भएको छ। रूसले यो नीतिअन्तर्गत विश्वकप हेर्न रूस पुगेका दर्शकले प्राप्त गरेको फ्यान आइडीलाई नै भिसाको आधिकारिक पत्र मान्ने भएको छ। यता कतार एयरवेजले पनि उक्त कार्ड बोकेर यात्रा गर्ने यात्रुलाई २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। रूसी सांस्कृतिक केन्द्रमा आइतबार आयोजित नेपालबाट विश्वकप हेर्न गएका फुटबलप्रेमीलाई धन्यवाद दिदै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
विश्वकप अफर विजेताले पाए ४३ इन्चको एलजी टिभी
काठमाडौं । एलजी कम्पनीको लागि नेपालको आधिकारीक विक्रेता सिजी इलेक्ट्रनिक्सले विश्वकप फुटबलको अवसरमा ल्याएको ‘प्रेडिक्ट एण्ड विन क्याम्पिङ’ योजना विजेताले ४३ इन्टको टिभि पाएका छन्। आफर अन्तर्गत ४ जनाले टिभी पाएका हुन्। एलजीको फेसबुक पेजमो गेमे विजेताको भविष्यवाणी गर्नेबाट विजेता छानिएको हो। सबैभन्दा बढी भविष्यबाणी गर्ने बनेपाका राज मान्नधरलाई एलजीको मिनभवनमा रहेको आफ्नो ब्राण्ड शोरुममा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर टिभी हस्तान्तरण गरेको छ। असार महिनाभर सञ्चालन रहेको अफरमा ४ जना विजेतालाई ४३ इन्च को स्मार्ट टिभी प्रदान गरेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ, १ साउन । रुस विश्वकप मुख्यतया दुई कारण चर्चित रह्यो । पहिलो बलिया भनिएका टिम फाइनल नै पुगेनन । दोश्रो कसैले नसोचेको टिम क्रोएसियाले फाइनल खेलेर सबैको मन जित्न सफल भयो । रुस विश्वकपलाई सम्झिने अर्को कारण हो, दुई उत्कृष्ट खेलाडीको उद्य र चर्चा । फ्रान्सलाई विश्वकप जिताउन मुख्य भूमिका खेलेका किलिएन एमबाप्पेले पेलेको रेकर्डसँग बराबरी गरे । फाइनलमा गोल गरेर १९ बर्षमै रुस विश्वकप २०१८ को सर्वोत्कृष्ट युवा पुरस्कार उनलै जिते । तर उनको यो अवार्डलाई पनि फिक्का पार्नेगरी क्रोएसियाका कप्तान लुका मोडिकलले उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जिते ।	थप पढ्नुहोस्
फ्रान्सले जितेको खुसीमा पेरिसमा उर्लियो मानवसागर, (लाइभ भिडियो)
फ्रान्सले विश्वकप उपाधि जितेसँगै राजधानी शहर पेरिसमा खुसीयाली मनाउनका लागि स्वतस्फूर्त रुपमा मानवसागर उर्लिएको छ । क्रोएशियालाई फाइनलमा ४–२ ले हराउँदै फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकप उपाधि जितेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
रसिया विश्वकपमा ४० करोड अमेरिकी डलरको पुरस्कार वितरण
काठमाडौं । रसियामा सम्पन्न २१ औं फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा ४० करोड अमेरिकी डलरको पुरस्कार वितरण गरिएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी भएका टिमदेखि विश्व च्याम्पियनसम्मलाई ४० करोड अमेरिकी डलरको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । विश्वकप विजेता बनेको फ्रान्सले ३ करोड ८० लाख डलर 'करिब ४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ' पुरस्कार पाएको छ भने उपविजेतामा चित्त बुझाएको क्रोएसियाले २ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर हात पारेको छ । इङ्ल्याण्डलाई पराजित गर्दै तेस्रो भएको बेल्जियमले २ करोड ४० लाख पाउदा चौथो भएको इङ्ल्याण्डले २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
यी हुन विश्वकप जिताउने फ्रान्सका नायकहरु !
रुस विश्वकप शुरु हुँदा धेरैले ब्राजिल र अर्जेन्टिनालाई फाइनलको दाबेदार मानेका थिए । यसमा पोर्चुगल, जर्मनी, स्पेन पनि बलिया टोलीका रुपमा देखिएका थिए । तर नतिजा ठीक उल्टो आउदै गयो । क्वाटरफाइनलका खेलसम्म ब्राजिल नै विश्व फुटबलको शक्तिशाली टिम बरियताको शीर्ष स्थानमै थियो । तर विश्वकै सबैभन्दा महंगा फुटबलर नेयमारको टोलीलाई बेल्जियमले एउटै गोल हानेर घर फर्काइ दियो । पहिलो गोल उपहार पाएको बेल्जियमले अर्को गोल बराबरी मात्रै खानुपरेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
रुस विश्वकपको उपाधि फ्रान्सलाई, फाइनलमा क्रोएसिया पराजित
रुस विश्वकप फुटबलको उपाधि फ्रान्सले जितेको छ । फाइनलमा क्रोएसियालाई ४–२ गोलले पराजित गर्दै फ्रान्सले उपाधि जितेको हो । फ्रान्सका लागि ग्रिजमेन, एम्बाप्पे र पोग्बाले गोल गरे भने एक गोल उपहार पाएको थियो । क्रोएसियाका लागि इभान पेरिसिचले गोल गर्दा मारियाले नै अर्को गोल गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
आत्मघाती गोल गरेका मारियोको गोल, क्रोएसिया खेलमा फर्किदै
क्रोएसियाले फ्रान्ससँगको अग्रता छोट्याएको छ । उसका सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडी मारिया मान्डुजिकले गोल गरेका छन् । फ्रान्सका गोलकिपरको गल्तीमा मारियोले गोल गरेर आत्मघाती गोलको पीडा बिर्साउने प्रयास गरेका छन । यद्यपी फाइनलको दोश्रो हाफमा क्रोएसिया अझै ४–२ गोलले पछि छ । तर पछिल्ला्े पटक राम्रा मुभ बनाएको क्रोएसिया खेलमा फर्किने प्रयास गरिरहेका छ ।	थप पढ्नुहोस्
एमबाप्पेको उत्कृष्ट गोल, विश्वकपको ट्रफी फ्रान्सको पोल्टामा !
फ्रान्सले विश्वकप ट्रफी जित्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ । उसका लागि किलिएन एम्बाप्पेले उत्कृष्ट गोल गरेका छन । एम्बाप्पेले खेलको ६५ औँ मिनेटमा गोल गरेका हुन । उनले डिबक्स केही बाहिरको बललाई सिधै गोलपोष्टमा प्रहार गरेका थिए । उनको गोलपछि फ्रान्सले विश्वकप जित्ने सम्भावना बलियो बनाउको छ । क्रोएसिया भने ४–१ गोलले पछि परेको छ । यद्यपी क्रोएसियाले राम्रो खेलिरहेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
फ्रान्सको अग्रता तेब्बर, पोग्बाको उत्कृष्ट गोल !
फ्रान्सले विश्वकप फुटबल खेल्ने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ । उसले अग्रता तेब्बर पारेको छ । उसका लागि पाउल पोब्बाले आकर्षक गोल गरेका छन । उनले खेलको ५९ औँ मिनेटमा गोल गरेका हुन । उनले पहिलो प्रहार हान्दा क्रोएसियाका खेलाडीको खुट्टबाट फर्केको थियो । तर त्यही प्रहारलाई उनले सशक्त ढंगले प्रहार गरेपछि गोलमा परिणत भएको हो । पोग्बाको गोलपछि फ्रान्सले ३ १ गोलको अग्रता लिएको हो । यसअघि आत्मघाती गोलबाट अग्रता लिएको फ्रान्सका लागि एन्टोनी ग्रिजमेनले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए । क्रोएसियाका इभान पेरिसिचले एक गोल गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
विकास साझेदार निकायलाई सहकार्य गरी ...